ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများယက်ရောင်း grippers rapier
Xi'an JW သွင်းကုန် & Export ကို Co. , Ltd မှတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများယက်၏အရည်အသွေးမြင့်မားများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် (JW-JW (dot) com မှာ sales123): 1. projectile အစိတ်အပိုင်းများနေရာယူထား: ဖိနပ်ကောက်နေ, အံသွားလမ်းညွှန်များအတွက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်ခရိုနီ, projectile grippers, ဘရိတ်နံရံ, projectile လမ်းခွဲ, Return, projectile လမ်းညွှန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု ...... ကောက်နေ ရက်ကန်း: Grippers, ဘီးမောင်း, ခုတ် ...... ရက်ကန်းများအတွက်လျောက်ပတ်: Somet 92, Somet 93, Thema11, Thema 11E, C401, P401, P1001, TP500, TP600, Picnaol Sulzer TW11, PUD1, PUD2, P7100 2. Rapier အစိတ်အပိုင်းများနေရာယူထား GTM, GTM-AS, Gamma, Fast, PANTER, G6100, G6200, Muller, Ruti, လီယိုနာဒို, SP251, P400XL 3. Air ကို-ဂျက်အစိတ်အပိုင်းများနေရာယူထား: nozzle, solenoid ဆို့ရှင်, ဖောက် detectors အ, ဓါးသွား, cams, cam လီဗာ ... .. Picanol Pat, Picanol Omni / မြစ်ဝကျွန်းပေါ်, Picanol Omni-ပေါင်း, Tsudakoma ZA200, ZA203, ZA205, ZA209, ZAX တိုယိုတာ 500 / တိုယိုတာ 600: ရက်ကန်းများအတွက်လျောက်ပတ်။
Rapier Gripper ရောင်းချ
Xi'an JW သွင်းကုန် & Export ကို Co. , Ltd မှ China.We အတွက်အထည်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်အဓိကအား projectile ရက်ကန်းစင်မှုအတွက်ထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်သည့်ယက်လုပ်ခြင်းရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့နေကြတယ်, Air ကိုဂျက်ရက်ကန်းစင်များနှင့် Rapier projectile ရက်ကန်းစင်သည်စသည်တို့ကိုဒီထက်မကကျွန်တော်တို့ရဲ့ , ဖိနပ်ထုတ်ယူခြင်း, ဆေးထိုးအပ် Tucking, projectile ပြည့်စုံ, projectile gripper, projectile ခန္ဓာကိုယ်, projectile လမ်းခွဲ, RH အဖောက်တံ, RH အလီဗာ, RH အဘား, ဖောက်အဆုံး gripper: အဓိကထုတ်ကုန်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, Sulzer မှ PU, TW11, P7100, P7200 နှင့် PS ရက်ကန်းစင်အဘို့ဖြစ်ကြ၏ link ကို, လီဗာ, projectile return, Fas ဖောက်တံ, ကတ်ကြေး, projectile လမ်းညွှန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, တစ်ခုတည်းသောအံသွားလမ်းညွှန်, rapier ရက်ကန်းစင်များနှင့်လေကြောင်းရန်ဂျက်ရက်ကန်းစင်နှင့်စပ်လျဉ်းစသည်တို့ကိုသွားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဘရိတ်နံရံကိုလမ်းပြကောက်နေကျနော်တို့ rapier ဦးခေါင်းအများအပြားမျိုးအတွက်အစွမ်းသတ္တိအားရှိသည်, rapier တိပ်ကောက်နေ , drive ကိုဘီး, Picanol ရက်ကန်းစင်များအတွက်ဝတ်စုံဖြစ်နိုင်သည့် nozzle, အာရုံခံကိရိယာ, soleniod အဆို့ရှင်, Somet ရက်ကန်းစင်, Vamatex ရက်ကန်းစင်, Tsudakoma ရက်ကန်းစင်, Muller စသည်တို့ကိုဒီထက်မက
ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများ Pu ခြေလျင်ယက်ရောင်းချ
ဆေးထိုးအပ် tsudakoma tucking ရောင်းချ
Vamatex rapier ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများရောင်း
Picanol rapier ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများရောင်း
Airjet အစိတ်အပိုင်းများတိုယိုတာ cam ဒီထက်မကရောင်းချ
ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့် projectile ရက်ကန်းစင်, rapier ရက်ကန်းစင်များနှင့် airjet ရက်ကန်းစင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်စက်ပစ္စည်းရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများယက် JW-JW (dot) com မှာ sales123 သည်။ projectile ရက်ကန်းစင်: Sulzer မှ PU, TW11, P7100, P7200 နှင့် PS ရက်ကန်းစင်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်: projectile ပြည့်စုံ, projectile gripper, projectile ခန္ဓာကိုယ်, projectile လမ်းခွဲ, RH အဖောက်တံ, RH အလီဗာ, RH အဘား, ဖောက်အဆုံး gripper, ဆေးထိုးအပ် Tucking, ဖိနပ်ထုတ်ယူခြင်း, ထုတ်ယူခြင်း link ကို, လီဗာ, projectile return, Fas ဖောက်တံ, ကတ်ကြေး, projectile လမ်းညွှန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, တစ်ခုတည်းသောအံသွားလမ်းညွှန်, သွားပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုလမ်းပြထုတ်ယူခြင်း, ဘရိတ်စသည်တို့ကိုတန်းစီ rapier ဒီထက်မကနှင့်လေကြောင်းဂျက်ရက်ကန်းစင်: rapier ဦးခေါင်း, rapier တိပ်, drive ကိုဘီး, nozzle, အာရုံခံကိရိယာ, soleniod အဆို့ရှင် အရာ Picanol ရက်ကန်းစင်များအတွက်ဝတ်စုံဖြစ်နိုငျသညျ, Somet ရက်ကန်းစင်, Vamatex ရက်ကန်းစင်, Tsudakoma ရက်ကန်းစင်, Muller စသည်တို့ကိုဒီထက်မက
တိုယိုတာ Sub nozzle: Airjet ရက်ကန်းစင်အစိတ်အပိုင်းများရောင်း